I-Suite ngaseCreek eduze kwaseSeattle - I-Airbnb
I-Suite ngaseCreek eduze kwaseSeattle
Ungathanda yini ukulala nokulolongwa komfula obhibhidlayo ngenkathi ujabulele uhambo olufushane - amamayela angu-13 - ukuya edolobheni laseSeattle? Khona-ke lena yindawo ongathanda ukuhlala kuyo! Le yindlu ethokomele, eyamukelekayo ye-MIL enendawo ehlukile yokungena kanye negumbi lokugezela elivuselelwe kabusha, iphansi elisha, amafasitela amasha, namahitha ahlukene asanda kufakwa. Ukufinyelela kalula ku-I-5 (5 min) kanye neLake Washington Burke Gilman Trail ngaphakathi kwebanga lokuhamba. Kukhona nesitobhi sebhasi phambi kwendlu, futhi.
I-suite yethu isendaweni enhle yemvelo kodwa eduze kwenxanxathela yezitolo encane kanye nesitobhi sebhasi esiya edolobheni laseSeattle (amamayela angu-14). Kukhona nesitobhi sebhasi phambi kwendlu yethu futhi.
Kuqhele ngamakhilomitha angaba ngu-30 ukusuka esikhumulweni sezindiza.
Kunezifundo ezimbalwa zokuqwala izintaba eduze ezihlanganisa i-Burke-Gilman trail engaphansi kwamamayela amabili ukusuka. Ezinye izindawo ezikhangayo ongazihlelela uhambo losuku zihlanganisa i-Alki beach, i-Olympic National park, ne-Leavenworth.
4.60 · 222 okushiwo abanye
Siseduze neDolobha laseDolobheni eLake Forest Park eseduze kwechibi elihle kanye nomzila ongahamba ngebhayisikili uqonde endaweni yaseSeattle. Futhi sisendaweni yesikole, ngakho-ke akukho zimoto ezimatasa endaweni (umkhawulo wesivinini ngu-20 mph ngesikhathi sendawo yesikole).